First Post | SHELTER9Architects (Myanmar)
Article / First Post Myanmar Traditional House
ရှေးမြန်မာအိမ် - ၂၊ ဆားတော်အုပ်ဦးထွန်းအောင်အိမ် အကြောင်း (၁)
“အလုပ်တစ်ခုကို မှန်ကန်စွာမလုပ်ခြင်းသည် အလွန်ညံ့သော ကိုယ့်ကျင့်တရားတစ်ခု ဖြစ်လေသည်။ မှန်ကန်စွာ မလုပ်နိုင်ခြင်းတွင် လုံလောက်သော အကြောင်းရှိစေကာမူ မှန်ကန်စွာ ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းကို အမှန်မုချပင် အမြဲ မပြတ် လိုအပ်လေသည်။ မှန်မှန်လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်ကို မှန်မှန်လုပ်ခြင်းသည် အဆန်းမဟုတ်။ မှန်မှန် မလုပ်နိုင်သည့် ကြားထဲက မှန်မှန်လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်းသာ လူူတစ်ယောက်၏ အရည်အချင်းကို ပြသလေသည်” ဟု ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးချစ်မောင် ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းဆိုရင် ကျွန်တော်သည် အလွန်ညံ့သော ကိုယ်ကျင့်တရားကို ကျင့်ကြံမိနေသူ ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆရာဦးမျိုးမြင့်စိန်တို့ ပြုစုခဲ့သည့် ရှေးမြန်မာအိမ်များ စာတန်းကို ပြန်လည်စုစည်းပြီး တင်ပြနေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ယခုအချိန်အထိ အပြီးသတ်အထိ မရောက်နိုင်သေး။
ဒါကြောင့် အလွန်ညံ့သော ကိုယ်ကျင့်တရား လျော့ပါးလို လျော့ပါးငြား ဆားတော်အုပ်ဦးထွန်းအောင်၏ အိမ်သည် ယနေ့အချိန်ထိ တည်ရှိနေလျက် ရှိ၊ မရှိကို ၂ဝ၁၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၅ရက်နေ့က ဟန်လင်းသို့ သွား၍ ကြည့်ခဲ့ပြီး (မရှိတော့ပါ) ရှေ့က မှတ်တမ်းတင်သွားသည့် ဆွဲပုံများကို ကြည့်ရလွယ်ကူအောင် ပြန်လည် စီစဉ်ထားသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်မှန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားရဦးမည်။ “လမ်းရိုးဟောင်းတွင် ဆင့်ကာထွင်” ဆိုသည့် စကားလေးအတိုင်း ဖြစ်လာရန်အတွက် လမ်းရိုးဟောင်းကို ပြန်လည်ခြုံငုံမိစေရန်ပင် အတော်ကလေး လုပ်ယူနေရသည်။
ယခုအချိန်အထိ စုဆောင်းတင်ပြထားသည့် အချက်တွေရရှိအောင် ဟန်လင်းအထိ အပင်ပန်းခံ လိုက်ပါမှတ်တမ်းတင်ပေးသည့် ဗိသုကာ မဖြူဖြူဆွေ၊ အိမ်ရှာရာတွင် ကူညီပေးခဲ့သူ ဦးစန်းဝင်း၊ အိမ်အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့သည့် လက်ရှိနေထိုင်သူ ဦးခင်မောင်တင့်၊ ညောင်ကိုးပင်ကျောင်းမှ ဆရာတော် ဥူးတေဇနိယတို့ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျက် . . .
Design Studio and Architectural Products
Room 3A, KBS Condo, No 10A, Pyitharyar Street, Thingangyun Township, Yangon.
+959799847992 shelter9.architects@gmail.com
Copy Right 2021 © SHELTER9Architects. All rights Reserved.
Web Design by Netscriper.